Accueil > Gazetin'ny nosy > Parlemanta : Tsy misy sahy mikitika ny lalàna ny tsy maty manota
Parlemanta : Tsy misy sahy mikitika ny lalàna ny tsy maty manota
Olana lehibe eto amin’ny firenena ny mahakasika ny atao hoe tsy maty manota nanomboka ny toana 2001 izay nitondran’ingahy Ravalomanana Marc sy ny firenena. Tamin’ireny fotoana ireny dia fangalarana mihoampampana no nisy tamin’ny volam-panjakana sy ny fananam-pirenena. Nanomboka teo no tena nivoitra ny fanondranana antsokosoko nataon’ny mpitondra ambony teto amin’ny firenena ny haren’i Madagasikara. Tamin’izany fotoana izany koa no nisian’ny tolo-dalàna izay milaza fa ny filohan’ny andrimpanjakana sy ny mpitondra ambony eto Madagasikara dia tsy azo tsaraina na dia nanodinkodina volam-bahoaka aza.
Noho ireo antony ireo no nampisy ny kolikoly avolenta teto Madagasikara. Hatramin’ny vadin’ny filoham-pirenena avy no tafiditra amin’ny kolikoly ity sy ny zanany tamin’ny fotoana nitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina iny. Maro koa ny fandikan-dalàna momba ny fitantanana ny volam-panjakana misy eto Madagasikara nanomboka tamin’ny taona 2001 io.
Amin’izao fotoana izao dia fototry ny fahantrana be mahazo ny firenena ny fisian’ny lalàna izay manome vahana ny mpitondra ambony tsy ho voakitikitika amin’ny halatra sy ny fanodinkodinana ny volam-panjakana. Tsy misy migadra na atao fanadihadiana nefa ireo maro no olona izay voakasika amin’izany hatramin’izao.
Raha ny zavatra misy ao amin’ny parlemantera roa tonta, dia ny depiote sy ny senatera dia tsy misy mieritreritra ny handinika izany izy ireo. Milaza fa miady amin’ny kolikoly nefa ny fositra voalohany mahatonga ny kolikoly aza odian’izy ireo tsy jerena akory.
Raha tsy misy fanamboarana ity resaka momba ny lalàna mahakasika ny tsy maty manota ity dia tsy maintsy hiroborobo hatrany ny kolikoly sy ny halatra ataon’ny mpitondra ambony eto Madagasikara.